Mibilaogy momba an’i India: akoranafo bio, manga, akondro, “chick-lit” sy Bollywood · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2018 8:39 GMT
Manana endriny samihafa amin'ny fanoratana momba an'i India amin'ity herinandro ity izahay. Anisan'ireo lohahevitra noresahana ny: akoranafo bio, chick-lit (tantaram-pitiavana), manga, akondro, Madras ary Bollywood.
Misy krizy hafa momba ny solika ve, ary mila mandinika loharanon-tsolika hafa ve isika mba hitazonana ny fiara, SUV (4×4), sy milina haf amila solika fandrehitra? Raha jerena ny fiakaran'ny vidin'ny solika, toa nahasarika ny fisainan'ny mpampiasa vola sasany ny bio-carburant (akoranafo bio), indrindra fa i Vinod Khosla. Azonao atao ny mamaky momba ny akoranafo bio ao amin'ny lahatsoratr'i Reuben.
Raha tsy naharaka ny adihevitra manontolo momba ny boky voalohany nataon'i Kaavya Viswanathan ianao, dia azonao atao ny mamaky ny lahatsoratr'i Komal Mehta momba ilay boky. Vakio ao ny Hevitr'i Komal Mehta momba ny Opal Mehta. Nahazo vola be i Kaavya, nahazo diplaoma tao Harvard, noho ny tantarany “chick-lit” voalohany. Tsy navela nivezivezy intsony ny boky vao haingana noho ny filazana fa hala tahaka nataon'ity mpanoratra tanora ity izany.
Satria avy any Chennai (Madras) i Kaavya, nitady bilaogera nanoratra momba an'i Chennai/Madras aho, ary izao no hitako. Madras, na Chennai araka ny fantatra, no renivohitry ny fanjakana atsimon'i Tamil Nadu, ary hita tao amin'ny Google Map ihany izy araka ny filazan'i Ashwin Kumar. Jereo ny sary Google Map misy an'i Chennai ao amin'ny bilaoginy ato. Manana fampahafantarana mahafinaritra sy saripika momba ny Madras Museum Theatre (Teathra Mozea Madras) i Pandian.
Ao an-tsain'ny rehetra ny voankazo manga. Avy amin'ny zana-kontinanta Indiana ny manga ary tondroina am-pitiavana ho “mpanjakan'ny voankazo”. ‘Vanim-potoanan'ny manga izao ary samy miresaka momba azy io ny any India sy ivelan'i India ihany koa. Toa navoakan'ny lahatsoratry New York Time ny momba ity manga, voankazo tsara sy mahavariana ity. Bilaogera marobe no nampiasa izany lahatsoratra izany ho toy ny fanombohana ary notaterina haingana tao amin'ny fahatsiarovany manokana momba ny voankazo. Noho izany, manoratra momba ny fomba nahazoan'ny rainy tahiry manga i Vidya. Ny manga tena ankafizin'i Vidya indrindra dia ny “Rumaani” avy any Vellore. An-jatony mahery ireo karazana manga ao India. Dyanmic Ram manoratra fa mampitaha ny fividianana manga amin'ny fanambadiana ny renibeny. Vakio ary jereo manokana ny fomba sy ny antony nahatongavan'ny renibeny tamin'ny fampitahana. Luv2cook mizara nahandro roa matsiro sy mampite-hihinana tamin'ny fampiasana, tsy inona fa manga ihany.
Raha miresaka momba ny voankazo, dia hita fa manjavona any India ny akondro dia. Rebecca manana lahatsoratra momba ny akondro an-dalam-pahaverezana ary eto ny rohy mankany amin'ny mozean'akondro tamin'ny lahatsorany. Bollywood, araka ny filazan'ny sarimihetsika Hindi azy, dia toa nahasarika ny sain'ireo tsy Indiana. SmartMama manoratra fa tsy niezaka mihitsy izy hanao azy ho lehibe any Hollywood, fa manantena ny hanao azy ho lehibe ao Bollywood. Mirary fahombiazana ho azy izahay miaraka amin'ny volony mavokely sy ny masony maitso.